Caalamka oo Somalia ka helay fursad ay iyadu dayacday & dhibka ka taagan | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Caalamka oo Somalia ka helay fursad ay iyadu dayacday & dhibka ka...
Caalamka oo Somalia ka helay fursad ay iyadu dayacday & dhibka ka taagan
(Hadalsame) 01 Nof 2021 – Dal marka uu dambaska ka kacayo wuxuu u baahan yahay istaraatiijiyadda kala soocda saaxiibbada “wax tarka dhabta ah” la kala bedesho, iyo saaxiibbada “ hadalka afka ah” la isku maaweeliyo.
Wuxuu kale oo u baahan yahay in uu yaqaanno qiimaha waxa uu haysto dalkiisa iyo qiimaha sare ee uu ku beddelan karo.
Waxaa ka mid ah ciidan, hub, sanco iyo wershedo, wddooyin, dekedo, airportiyo, jaamacado, cisbitaallo iwm.
1960-1990 dalkeenna wixii ka dhismay kala beddelashadaas ayey u badnayd.
Soomaaliya oo dib u dhis dawladnimo u baahnayd (2000 – 2021) waxaa muuqata dana badan oo culus oo laga helay in bilaash (free of charge) lagaga helay.
Wax dan guud ah oo la taaban karo oo lagaga beddesheyna aaney jirin, ama aad u yartahay. Waa nasiib darro iyo jaanisyo innaga lumay.
Previous article”MBS wuxuu qorsheeyey inuu Boqor Cabdallah ku khaarajiyo faraanti sumaysan!” – Madaxii hore ee Sirdoonka Sucuudiga oo arrimo badan kashifay!!
Next articleCillado & cudurro laga qaado qofka oo iskaabulannimada ku yara daaha